'Poolisiifi raayyaan biyyaa fagoofi dhiyoorraa saboota gidduutti okkara warra uuman seeratti dhiyeessu' - BBC News Afaan Oromoo
'Poolisiifi raayyaan biyyaa fagoofi dhiyoorraa saboota gidduutti okkara warra uuman seeratti dhiyeessu'
16 Adooleessa 2018
Erga pireezidantii Ertiraa Isaayyaas Afawarqii buufata xayyaaraa Idil Addunyaa Booleetti argamanii erga gaggeessan booda haasawa taasisaniin, MM Dr. Abiy Ahimad poolisii fi raayyaan waraanaa namootaa fi gareewwan uummatoota walitti buusan, lubbuun namaa akka darbu godhan, yookaan gargaaran gara seeraatti akka dhiyeessan gaafatan.
Daawwannaa Pirezedaanti Isaayyaas jila ol-aanoo biyya isaanii qabatanii Itoophiyaa keessa turtii taasisanii deebiyan guddaa galataaffetaniiru.
Kana malees, artistoota gameeyyii Dr. Kabajaa Alii Birraa fi Mohaammud Ahimadis dhukkuba isaanii dandamatanii waan sagantaa kanarratti argamaniif guddaa galateeffataniiru.
Jila Ertiraa kana waliin waan hundaan waliin taanee wal tumsuudhaan hojjechuudhaaf walii galleerra kan jedhan Ministirri Muummmichaa, gama hariiroo hawwaasummaatiin, diinagdee, siyaasaafi nageenyaan waliin taanee hojjechuudhaan jireenya lammileen biyyoota lamaanii foyyeessuun akka nurraa eegamu waliif galleerra.
"Kun oduu gammachiisaa waan ta'eef, uummanni Itoophiyaafi Ertiraa baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Irra deebiyee kanan isiniif mirkaneessuu barbaadu haraarr biyyoota lamaan gidduutti uumame, gaaffileen Itoophiyaa keessa jiran garri caalan deebii argachuudhaaf abdiin ifaa fuuldura keenya akka jiru kan agarsiiseefii jabaannee hojjennee jijjiiramuu yoo murteeffanne carraawwan hedduun dhiyaarraa hanga fagootti dhifaa jiraachuu isiniif irra deebiyuudhaan nan mirkaneessa."
Nagaa biyya keessatti uumamaa jiru kana nu gargaaruudhaafi nu cinaa dhaabbachuun nu tumsuuf biyyoonni baayyeen fedhii agarsiisaa jiran kan abdii namatti horanidha jedhan Dr. Abiyyi.
Waa'ee sharafa alaa
"Carraa kanaan osoo nutti hin himamiin akka hin jedhamneef namoonni sharafa alaa guddaas ta'e xiqqaa arkatti qabattanii jirtan yoo jiraattan guyyoota muraasa keessatti gara baankota naannoo keessanitti argamanii deemtanii jijiiruudhaan kasaaraarraa of oolchuu qbdu."
Akka Dr. Abiyyi jedhanitti, sharafni alaa haala foyyaa'aa ta'een biyya akka galu taasisaa waan jirruuf, namoonni of arkaa qaban gara baankii deemuudhaan ar'arraa kaasanii taajila si'ataa ta'e waan kennamuuf of oolchuu qabu.
Baankonni Itoophiyaa keessa jiran hunduu kan dhuunfaafi mootummaa sharafa laas ta'e qarshii biyya keessaa kan hangi isaa guddaa ta'e qabatanii yeroo gara baankii dhufanitti diddaa tokko malee tajaajilli akka isaaniif kennamu ibsan Ministirri Muummee Dr. Abiy.
Torban muraasaan booda maallaqa seeraan ala kuufamanirratti duulli jalqabamu waan jiruuf osoo kun hin uumamiin dura namoonni carraa kanaan maallaqa qaban gara seera qabeessummaatti akka deebisan cimsanii hubachiisaniiru.
Sharafa alaas ta'e maallaqa biyya keessaa arkatti qabatanii jiran gara baankii geessuudhaan seera qabeessummaa mirkaneessuudhaan hojii dinagdee tsgabbeessuu biyyaattiin hojjetaa jirtu keessatti akka ga'ee isaanii ba'an kan waamicha dhiyeessan.
'Warra fagoo dhaabatanii kibriita kennan'
Kana malees waldhabdee iddoowwan garagaraatti uumamaa jiraniin lubbuun namaa darbaa jira kan jedhan Dr. Abiy, 'keessattuu Naannolee Oromiyaa fi Somaalee gidduutti lubbuun namaa [akka baalaatti] harca'aa jira,' jedhan.
Sababa kanaas wayita kaa'anis namoonni kallattiin harka 'Fagoo dhaabatanii kibriita, boba'aa fi qoraan kan kennan jiru.
Poolisii Fedeeraalaa fi Raayyaan Ittisa Biyyaa 'Sa'aatii ammaarraa eegalee namootaa fi gareewwan uummatoota walitti buusan, lubbuun namaa akka darbu godhan, yookaan gargaaran gara seeraatti dhiyeessaa,''
Kan malees gidduu seenuun ittigaafatamummaa itti kennameef akka bahatan waamicha dhiheessaniiru. 'Kanas wayita gootan kasaaraa biraa akka hin dhaqqabsiifnef ogummaa keessan fayyadamaa,'' jedhaniiru.
Waliigaltee nageenyaa Itoophiyaa fi Eertiraa
Itiyoo-Ertiraa: Danqaalee hegeree Itoophiyaa fi Eertiraa dura jiran
Waldaan qoloo gabaabduufi jiinsii tarsa'aa uffattanii hin dhufiinaa jette
Misirroon boolla buutee lubbuun dabarte
Seerri 'farra Musliimaa' Hindii maaliif mormii kaase